NAIROBI, Kenya - Ganacsatada Qaadka Kenya ayaa ku dhawaaqay inay la safan yihiin dowladooda, islamarkaana ay diyaar u yihiin inay joojiyaan Qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya kadib markii xiisad diblomaasiyadeed ka dhex qaraxday labada dal.
Urur ay ku midoobeen Ganacsatada Qaadka Kenya ayaa sheegay in madax-banaanida dalkooda aysan ku bedelin doonin "Miraa" kaasi oo noqday mid lagu handado Kenya in laga joojinayo marka uu yimaada khilaaf kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya.
Kenya ayaa maalin walba usoo dhoofisa Soomaaliya Qaadka dhan 50 tonnes, waxaana kasoo gala qiimo lacageed oo gaareya ku dhawaad 100 Milyan oo dollarka Mareykanka, waxaana la geeyaa dhamaan gobollada dalka, marka laga reebo kuwa Al-Shabaab.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay, Ganacsiga Qaadka Puntland ayaa culeysyo soo wajahay kadib markii dowladda Canshuuro xad-dhaaf ah kusoo rogtay, iyadoo Muqdisho ay dooneyso inay Qaad raqiis ah ka keensato dalka Itoobiya.
Waxay sheegeen Ganacsatada in Madaxweyne Saciid Deni uu saarey Sh500 halkii Kilogramme [1 Qumbulad] oo Qaad ah.
Soomaaliya ayaa ah suuqa ugu weyn ee loo soo iib geeyo Qaadka Kenya, kadib markii dowladda Ingiriiska ay sanadkii 2015 dalkeeda ka mamnuucay in la geeyo, maadaama Qaadka ay ku jirto daroogo halis ah.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay marki sabtidii lasoo dhaafey ay dowladda Kenya u yeeratay safiirkeedii Muqdisho, sidoo kalena ka dalbatey midka Soomaaliya inuu dalkeeda ka baxo, kadib markii Dowladda Federaalka ay London ku qabatey Shirkii Shidaalka.
Kenya ayaa sheegtay inay dowladda Soomaaliya xaraash ku iibisay xirmooyin shidaalka oo ku jira xuduud badeedkeeda, taasina ay dhaawacayso madax-banaanida dalkeeda.
Laakiin, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa xalay beenisay eedeymaha Kenya, iyadoo sheegtay inaysan jirin goobo shidaalka oo ku yaalla badda lagu muransan yahay oo ay iibisay dowladda. [Halkan ka akhri warka]
Maamulka Madaxweyne Farmaajo ayaa wajahaya mucaarado xooggan kadib markii ay...